Otu onye eji ide akwụkwọ mara n’ala anyị bụ Ọkammụta Wole Soyinka ekwuola n’akụkọ ụgha nwere ike ibute agha nke ugboro atọ. Nwaamadị a kwuru na e kwesiri ihu akụkọ ụgha ka esi hụ ohi.
Soyinka kwuru nke a na nzụkọ banyere akụkọ ụgha na-aga n’ihu ụgbụ a. Otu onye nọchitere anya INEC na mmemme ahụ bụ maazị Festus Okoye bụkwa onye bụ onye kọmishịọna INEC n’ala anyị kwuru n’akụkọ ụgha ga-ebutere ntuliaka elu a ga-eme n’ala anyị aka mgba ma gwa ndị nche nọ n’ala anyị ka ha mụrụ anya.
Okoye gara n’ihu kwuo n’ala anyị nwere ọtụtụ ndị iwe na-ewe nakwa ndị nwere ebumnuche dị iche iche. Ọ gwara ndị mmadụ ka enwee ndiiche n’ihe ha ga-ekwenye na ya na nke ha n’agaghị ekwenye na ya.
Ọ gwara ndị nchekwa dị n’aka n’ala anyị ka ha nọrọ na nche oge niile.
Ọ gwara INEC dịka òtù nọrọ onwe ya ka ha na ndị mmadụ n’akparịta oge niile. O kwuru na nke a ga-eme ka ahapu inwe ohere maka akụkọ ụgha.
Tags: 2019 electionsfake newsINECNIGERIANSSecurity agenciesWole Soyinka